Varietiesdị poteto ndị kachasị ewu ewu: "kpakpando" nke oge 2020 - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
N'oge opupu ihe ubi dị n'ọnụ ụzọ, ọ fọdụrụ obere oge tupu akuku, ọtụtụ ndị na-akụ nduku ekpebiela ụdị ụdị ha ga-adabere na afọ a. Banyere ihe na-achọsi ike N'oge ahụ, anyị gwara ndị na-akọ ugbo ka ha gwa Andrey Kiselev, onye isi nke Osisi Nduku nke AgroAlliance-NN LLC.
- Nhọrọ nke dịgasị iche iche na-adabere na mpaghara mgbe niile. Ugbo ndịda (Rostov Mpaghara, Krasnodar Territory) na-ahọrọ ịkụ mkpụrụ n'oge-oge Colomba na Red Scarlett. Na mpaghara Astrakhan, otu Red Scarlett gosipụtara ezigbo nsonaazụ; Riviera, Arizona, Memphis na-achọkwa. Varietiesdị ndị a niile na-enye gị ohere inweta owuwe ihe ubi magburu onwe ya ozugbo enwere ike.
Na mpaghara nke etiti uzo, ndị na-akọ ugbo na-akụkarị Gala, Vega, Colomba, Red Scarlett, Queen Anna, Madeira, Baltic Rose.
Ọ bụ ihe na-ekwe nkwa ịkọ ụdị "ọcha" ma ọ bụ "ọbara ọbara"?
- Ugbo ala Russia nwere mmasị na poteto "ọcha", a kwenyere na ọ ka zụrụ ha nke ọma. Ná nkezi, ụdị anụ ọcha na-acha ọcha na- 75-80% nke usoro ahụ. Ma ndị nwere akpụkpọ anụ uhie ga-enwerịrị na agwaogwa ahụ, enwere afọ mgbe ọ bụ ha "gbara".
Reddị-acha uhie uhie kachasị ewu ewu - Red Scarlett?
- Ee, ọtụtụ afọ n’ahịrị. Ebumnuche, ọ ka na-esiri ike ịchọta ụdị dị iche iche nke ga-asọ mpi ya n'akụkụ niile. Agbanyeghị, n'ezie, enwere nhọrọ na-adọrọ mmasị na ahịa. N'ime ndị ahụ edepụtara, m ga-edepụta Memphis, ọ bụghị n'oge dị ka Red Scarlett, mana ọ nwere mkpụrụ dị oke oke, na-eguzogide ụkọ mmiri mmiri, kwesịrị ekwesị maka nchekwa nchekwa ogologo oge. Ma e wezụga ya, ọ mara ezigbo mma maka ndị na - azụ ahịa - ndị a bụ poteto na ọbụna tubers na - enwu gbaa, mara mma.
Ọ ga-amasị m ịdeba Baltic Rose - ọ na-egosi onwe ya nke ọma n'ọhịa, kwesịrị ekwesị maka ịsa ahụ ma nwee ohere ọ bụla ịbanye n'otu ìgwè nke ụdị dị iche iche na mba anyị.
Na nkowa banyere blond?
- Nke mbu, nka bu Gala. A maara ụdị dịgasị iche iche ma too n'ọtụtụ mpaghara. N'okpuru nkà na ụzụ ugbo, ọ na-enye ihe ọkụkụ nke ezigbo mma. Kpee onwe gị ikpe: ọ bụrụ na a na-erezi poteto dị na ahịa na 8 rubles / kg, mgbe ahụ maka Gala ha na-enye 9-10 rubles / kg. Obere ihe amachaghị bụ Vega, ụdị mmiri na-eguzogide ụkọ mmiri ozuzo ọtụtụ tuber.
Madeira bụ ihe na-atọ ụtọ: usoro dị iche iche na-amị mkpụrụ, mara mma nke ukwuu - tubers na-enwu gbaa, ọbụlagodi-oval - ezigbo maka ịsa.
Ma n'ezie Colomba bụ ụdị mmalite dị iche iche na-enye agbanwe agbanwe. Nduku dị mma maka ịsa, ha mara mma na nkwakọ ngwaahịa, a na-eji obi ha ewepụ ya mgbe niile maka ire ere site na ụdọ mkpọsa.
Afọ a bụ ezigbo ọkụ oyi, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na anyị kwesịrị ịkwadebe maka mbuso agha nke pests na-ekesa ọrịa. Kwesịrị iburu ihe a n'uche mgbe ị na-ahọrọ ụdị?
- Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-etinye uche pụrụ iche na mkpụrụ nke mkpụrụ, ma ọ bụghị na ọ bụ nnọọ ike ịdabere na ezi utịp ke ọ bụla oge.
Tags: VegaGalaColomboMadeiraUhie uhiemkpụrụ nduku
Osisi Lam Weston Belaya Dacha maliteghachiri ọrụ ya
Ngwa ziri ezi nke nematicide - mmepụta ihe ọhụrụ